'Kukhala ibhungezi emzini okwabulawa kuwona uSenzo' | News24
'Kukhala ibhungezi emzini okwabulawa kuwona uSenzo'
Johannesburg - Umphakathi waseVosloorus awukakhohlwa ngokubulawa kwesihlabani seBafana Bafana ne-Orlando Pirates, uSenzo Meyiwa.
Amalungu alo mphakathi asaba ngisho kudalulwe amagama awo uma kukhulunywa ngalolu daba ngenxa yokuthi ababulali abakatholakali.
Kuthiwa iningi labantu abahlala kulo mphakathi sebeqinise ezokuphepha, kodwa azikaze ziqiniswe emzini okwabulawelwa kuwona umufi.
“Kuthulekile laphayana,” kusho omunye umakhelwane. “Ababaningi abantu ababonakala bevakasha kulo muzi muva nje, ngisho nomama kaKelly imbala sagcina ukumbona ngemuva kancane kwesehlakalo,” kubika iDrum.
Funda nalolu daba: Kushone ababili imoto ishayisa isigxobo
Lo makhelwane utshele abeDrum ukuthi uNtombi, umama kaKelly Khumalo, wagcina ukubonakala ngemuva kwesehlakalo kuphela, ngemuva kwalokho akaphindange walubhada kulo muzi .
“Abantu bakholelwa wukuthi lo muzi wafakwa isiqalekile ngemuva kokushonela kuwona isihlabantu saseNingizimu Afrika.”
“Angisajwayele ukubona abantu khona, sekuhlala kuthulekile nje, ngisho noKelly usebonakala kancane.”
Khonamanjalo, okhulumela amaphoyisa kuzwelonke, uSolomon Makgale, uqinisekise umphakathi ngokuthi basamatasa ngalolu daba kanti futhi umphakathi bazowazisa uma sebenobufakazi obuqinile.